Ezinụlọ Google Nexus ga-apụ n'anya n'afọ a | Akụkọ akụrụngwa
N’ehihie ụnyaahụ, webụsaịtị ndị uwe ojii gam akporo Android bipụtara ozi gafere ụwa ọtụtụ oge. O doro anya na ezinụlọ Google nke Nexus ga-apụ n'anya n'afọ a. Yabụ ọ dị ka Google Nexus ọhụrụ, ọnụ ndị HTC mepụtara, ha agaghi enwe aha Nexus ma ha g’enwe aha ozo a maghị nke ahụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ a na-atụ anya ya.
Ihe omuma a na egosiputa na ekwenti n’agha n’enye ya n’aho a, ya mere ha nwere ike buru ogwugwu HTC ma obu ihe ohuru ohuru nke anyi n’amaghi, ihe puru idaba na ihe nile anyi mara ugbu a.
Ọ ga-abụrịrị na ọ ga-abụ gam akporo Nougat ga-enwe gam akporo naanị kamakwa ọ ga-enwe akwa akwa nke anyị maraworị ọdịdị nke bọtịnụ mebere, ihe ga-emekwa ọ ga-enwe nsogbu na ozi anyị nwere site na Nexus Launcher, launcher nke ga-adị na mobiles ọhụrụ ahụ ma nweta aha Nexus.
Enwere ike ịnwe ekwentị Google ọhụụ nke agaghị esite na ezinụlọ Nexus
Otu nhọrọ ga-adaba na ozi niile bụ ọ ga-ekwe omume na Google ga-ewepụta ngwaike nke ya n'afọ a, ihe a kwurula banyere ya ogologo oge na nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu mana ọ bụ eziokwu nke na-agaghị enwe aha otutu nke Nexus. Ohere a ga-adaba na ozi niile, agbanyeghị, igwe eji ekwu okwu ga-asọrịta mpi nke mere na ogologo oge ọ gaghị abụ nnukwu echiche maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ọ dị ka ọ dị.
N'oge a ihe niile na-adị n'ikuku ebe ọ bụ na ọ nweghị onye sitere na Google kwadoro na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ezie na mgbe ekwuru ya na ezinụlọ Nexus agaghị aga n'ihu, ọ nwere ike bụrụ eziokwu, n'agbanyeghị na enwere m obi abụọ na ọ ga-abụ nke a afọ mgbe ihe niile na-eme. Enwere ike ịbụ ihe anyị maara n'afọ ọzọ na gam akporo 8, ihe ga-ekwe omume Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ezinụlọ Google Nexus ga-apụ n'anya n'afọ a
Fitbit Charge 2 na Fitbit Flex 2, ihe eji eyi ọhụụ abụọ dị ugbu a